I-ANCWL igxeke imibiko yephephandaba 'ngomuzi kaZuma oseDubai' | News24
I-ANCWL igxeke imibiko yephephandaba 'ngomuzi kaZuma oseDubai'
Cape Town – I-ANC Women’s League isigxeke udaba olushicilelwe yiphephandaba oluthi uMengameli Jacob Zuma wathenga umuzi kanokusho eDubai esizwa umndeni wakwaGupta.
Esitatimendeni esikhishwe ngeSonto ebusuku, i-ANCWL ithe ikhathazekile ngodaba elubone ephephandabeni iSunday Times oluthi uZuma unomuzi kanokusho eDubai, ithi lolu daba luqinisekisa inzondo ekhona ngendlela izintatheli ezibika ngayo.
I-ANCWL ithe ngomhlaka-8 Meyi 8 2016, iCity Press yayihamba phambili ngodaba oluthi abakwaGupta banomuzi kanokusho obiza u-R445m e-L38, khona eDubai.
Ngemuva konyaka, mhlaka-4 Juni 2017, iSunday Times ihambe phambili nayo ngodaba oluthi uZuma unomuzi kanokusho khona eL38, eDubai.
OLUNYE UDABA: Kutholakale izidumbu zishisiwe eGauteng
Uphiko lwabesifazane luthe odabeni lweCity Press, intatheli yabhala kwangathi luyiqiniso lolu daba lomuzi kaZuma eDubai.
Ithi imibiko yeSunday Times ifana ncamashi neyeCity Press, ngamanga.
I-ANCWL ithi iphephandaba abukho ubufakazi elibuvezile odabeni lwalo kanti futhi inhloso yephephandaba ukudayisa kakhulu iphepha nokudukisa umphakathi.
“Siphonsela inselelo iSunday Times ukuba iveze ubufakazi obunjengetatiyela, obuveza ukuthi ngempela le ndawo okukhulunywa ngayo ingekaMengameli.”